विवेकशील नेपालीका अध्यक्षले लिएको जस्तो निर्णय लिन सक्ने अर्को दल छ त हाम्रो नेपालमा ? रविको प्रश्न::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
विवेकशील नेपालीका अध्यक्षले लिएको जस्तो निर्णय लिन सक्ने अर्को दल छ त हाम्रो नेपालमा ? रविको प्रश्न
‘हरेक राजनीतिक दलमा पूराना भन्दा नयाँ पुस्ताहरु आशा लाग्दा छन्’
नेपालको एउटा सानो राजनीतिक दल विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्वल थापाले आफ्नो दलको आगामी अधिवेशनमा आँफू अध्यक्षको रुपमा उमेद्वारी नदिने घोषणा गरेका छन् । विवेकशील नेपाली दल तुलनात्मक रुपमा ठूलो दल होइन, एउटा सानो दल हो । तर, जति सानो दल भएपनि यो निर्णय बहुत ठूलो निर्णय हो ।
उमेरका हिसाबले पनि उज्वल थापा ५० बर्ष काटेका पनि छैनन् होला । न यो दलले कतै प्रत्यक्ष चुनाव जितेको छ, न त यो दलबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि नै सांसदको रुपमा संसद पसेका छन् । राजनीतिक संस्कारको यो उदाहरण नेपाली राजनीतिका लागि चानचुने कुरा होइन । मृत्यु शैयामा पुग्दा पनि पद नछोड्ने राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्षको यो निर्णय अत्यन्तै तारिफ योग्य छ ।
अन्य राजनीतिक दलले यस्तो निर्णय गरेको मिनेटभित्र जनतामा उत्साह छाउँछ । यो मुलुकमा बिकास नभएको भन्दा पनि उही टेस्टेड नेताहरुको अनुहार, आचरणले गर्दा मासिनमा उत्साह घटेको छ, भन्दा फरक नपर्ला । एक पटक प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिलाई जनताले चिनिसकेका हुन्छन् ।
उसको कार्यशैली, भिजन, इमान्दारीबारे थाहा पाउन आम मानिसलाई २÷४ महिना पनि लाग्दैन । तर उही व्यक्ति बारम्बार देशको कार्यकारी पदमा पुग्दा मानिसले पाउने भनेको निराशा मात्रै हो । एक पटक पार्टी अध्यक्ष वा सभापति भैसकेपछि, एकपटक प्रधानमन्त्री नै भैसकेपछि फेरि पनि उनैको सम्भावना देखिदा मुलुकमा अचम्मै हुन्छ भनेर मान्न सकिदैन । कोही अपवाद् होलान, यो बेग्लै कुरा हो । हरेक राजनीतिक दलमा पूराना भन्दा नयाँ पुस्ताका मानिसहरु आशा लाग्दा देखिएका छन् ।
प्रत्येक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता साथीहरुलाई एउटा बिनम्र अनुरोध गर्छु । तपाईहरु यो माटो छोएर, आँफूलाई जन्म दिने आमा बाबुलाई सम्झेर आँफूले जन्माएका छोराछोरीको शिरमा हात राखेर एउटा लिष्ट बनाउनुस् । मैले सदस्यता लिएको वा मैले आस्था राखेको दलका इमान्दार, भिजनरी, प्रतिबद्धता, गर्व गर्न लायक, क्षमतावान् र यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्ने नेताहरु यी–यी हुन् । धेरै पर्दैन, जम्मा २ देखि ३ जनाको लिष्ट बनाउनुस् ।
तपाईले यो माटो, आफ्ना बा–आमा र आँफूले जन्माएको सन्तान सम्झेर निःश्वार्थी भई बनाएको लिष्टमा तपाईको दलका अहिलेका शीर्ष नेता पर्छन्, कि होनहार युवानेताहरु पर्छन् ? यसको जवाफ आँफैसँग राख्नुहोला । केही फाइदाका लागि पावरमै भएकालाई मान्नुको विकल्प छैन, तर तपाईलाई आज काम लागेको नेता भोलि तपाईका छोराछोरीलाई काम नलाग्न सक्छन् ।
तर देशलाई काम लाग्ने नेतालाई आफ्नो प्रमुख नेता बनाउनुभयो भने त हाम्रा सन्तानले तपाइले र मैले जस्तो कुनै नेता चिन्नै पर्दैन नि ! आज आफ्नो सानो स्वार्थ पूरा गर्न होनहार योग्य नेतालाई अघि सार्न सक्नुभएन भने सिंगो देश पछि पर्छ । र, एक माघले जाडो जाँदैन । यो दल, उ दलको कुरा होइन प्रायः सबै प्रमुख दलको प्राथमिकता हेर्नुस् त ।
वा, अंकल नेताहरु यो देशको विकराल समस्यालाई वास्तै नगरी पार्टीभित्र आफ्नो पोजिसन बनाउन झिसमिसेदेखि मध्य रातसम्म मिटिङका मिटिङ गर्छन् । यदि यी नेतागणलाई आफ्नो पोजिसनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी नभएको भए कुनै ठेकेदारले बर्षौसम्म बाटो नबनाएर अलपत्र पार्ने हिम्मत गथ्र्यो ?
सजाय त कहाँ हो कहाँ पुरस्कार स्वरुप ठेक्कामाथि ठेक्का पाउँथ्यो ? २५ बर्षसम्म मेलम्ची अलपत्र पथ्र्यो ? १२ बर्षदेखि हुलाकी राजमार्ग अड्किन्थ्यो ? सिक्टा सिँचाई १५ बर्षदेखि अनिश्चित हुन्थ्यो ? भेरी बबई डाइर्सन, मध्येपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर सबका सब अड्किन्थे ?
एक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतालाई फेरि प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने च्यानल मिलाउँदै फुर्सद छैन । अध्यक्ष, सभापति, महासचिव, बनिसकेका लागि फेरि पार्टी प्रमुख नै बन्नु छ । गनेरै नभ्याउने गरी मन्त्री बनिसकेकाका लागि फेरि जसरी पनि सके प्रधानमन्त्री नसके मालदार मन्त्रालयको मन्त्री नै बन्नु छ । अनि अपर तामाकोशी, कालीगण्डकी करिडोर, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग त के, बौद्ध– जोरपाटी, भक्तपुर–नगरकोटमा बाटो पिच हुन समेत १० आँै बर्ष लाग्छ ।
त्यसैले बरु टेस्ट भैसकेका प्रत्येक दलका टप १० नेता गणलाई उहाँहरुले यो देशका लागि गर्नुभएको त्याग, बलिदान र योगदानको उच्च कदर गर्दै स–सम्मान १० बर्षका लागि आराम गर्न उहाँलाई मनपर्ने अर्को देशमा स–सम्मान घुम्न, रिल्याक्स गर्न पठाइदिउँ ।
उहाँहरुकै दलका अर्काे पुस्ताका नेताहरुले उहाँहरु फर्किदासम्म यो देशलाई उहाँहरु घुम्न गएको देशको हाराहारीमा पु¥याउन सक्छन् भन्नेमा म त विश्वस्त छु । विवेकशील दलको आइडोलोजी, एजेण्डा त्यस दलका अध्यक्षको योग्यता, क्षमता बारे थाहा छैन र वर्णन गर्न खोजेको पनि होइन तर यस दलका अध्यक्षले लिएको जस्तो निर्णय लिन सक्ने अर्को दल छ त हाम्रो नेपालमा ?